इन्द्रेणीको बिवाद पछी टिका सानु र कृष्ण कंडेल एकैसाथ पहिलो पटक मिडियामा ! कृष्णले मागे माफी -
Home News इन्द्रेणीको बिवाद पछी टिका सानु र कृष्ण कंडेल एकैसाथ पहिलो पटक मिडियामा...
इन्द्रेणीको बिवाद पछी टिका सानु र कृष्ण कंडेल एकैसाथ पहिलो पटक मिडियामा ! कृष्णले मागे माफी
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्माले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुवैलाई फकाउने प्रयास गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग एक घण्टा छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग मिल्न र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग सहकार्य नगर्न सुझाएका थिए।
नेपालबाट जुनसुकै बेलामा समेत धोका हुन सक्ने भएकाले आफूसँगै मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको प्रचण्ड निकट एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए। यता प्रचण्डले भने ओलीलाई बैठकमा आएर छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। २१ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागि थिएनन्। उनले स्थायी कमिटी बैठकमा पत्र पठाएर प्रचण्ड प्रस्ताव खारेज नभएसम्म बैठकमा सहभागि हुन नसक्ने बताएका थिए।
प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ गते ३८ पृष्ठको प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रचण्डसँगै नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। आफू निकट नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल निवास कोटेश्वर पठाएर प्रस्ताव राख्ने गरेको नेपाल निकट एक नेताले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुले माधव कमरेडलाई तपाईनै हो अबको नेता, पूर्व एमाले एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरेका छन्,’ ती नेताले भने, ‘प्रचण्डसँग मिल्नु हुँदैन। तपाईँलाई नेतृत्वको ग्यारेन्टी हामी गर्छौ भनेर भन्छन्। कस्तो ग्यारेन्टी हो? भन्दा उनीहरूसँग जवाफ छैन।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री एवम् स्थायी कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत कोटेश्वर गइरहने गरेको ती नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठक अघिनै सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले आफू निकटका नेतासँगको छलफललाई तिब्रता दिएका छन् भने प्रचण्ड र नेपाललाई टाढा बनाउने प्रयास समेत गरिरहेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै एक पद छोडेमा सहमतिमा जाने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार नभए केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय गर्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको योजना छ।
Previous articleसरस्वती लाई अप**हरण गरेको भन्दै शं”काको घेरामा रहेका बिक्रम पहिलोपटक मिडियामा खास कुरा के हो हेर्नुस्?
Next articleगाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाह , पुरा पढ्नुहोस्। बधाई र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला